Wararka Maanta: Axad, Sept 23, 2012-Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Puntland iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan Degmada Qardho ee Gobolka Karkaar
Guddiga ayaa shalay kulan balaaran la qaatay maamulka gobolka Karkaar, kan degmada Qardho iyo qaar kamid ah cuqaasha iyo waxgaradka. Kulankaas oo mudo saacado ah qaatay wuxuu ka dhacay Hotel Gufurre.
Gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Puntland Dr. Maxamed Xasan Barre oo kulanka kadib saxaafadda la hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada socdaalka ay xiligan magaalada Qardho kusoo gaareen.
Wuxuuna sheegay in uu yahay mid salka ku haya sidii ay wacyigelin arimaha doorashada la xiriirta u siin lahaayeen bulshada ku dhaqan degmada Qardho iyo guud ahaan gobolka Karkaar.
Dr. Barre oo arintaas sharaxayana waxaa hadaladiisii kamid ahaa: "Sidaad la socotaan dhowaan waxa la ansixiyey xeerka doorashooyinka, talaabada xigtana waa sidii bulshada loo fahansiin lahaa qaabka ay wax u dhacayaan, xubnaha gudigu way is qaybiyeen, aniguna waxan kusoo beegmay gobolka Karkaar iyo qaybo kamid ah Bari"
Dhowaan ayey ahayd markii la shaaciyey wakhtiga ay bilaabmeyso iyo weliba xiliga ay ku egtahay diiwaan gelinta ururada siyaasadda, kuwaas oo ku tartami doona doorashooyinka dowladaha hoose ee la filayo in ay ka qabsoomaan dhamaan gobolada Puntland.
Sadexda urur ee hela codadka ugu badan tartanka doorashooyinka dowladaha hoose, ayaa noqon doona sadexda xisbi ee sida rasmiga ah ugu loolami doona hogaanka Siyaasadda ee Puntland.
Si kastaba ha ahaatee geedi socodka Dimuqraadiyeynta Puntland ayaa u muuqda mid si dardar leh ku socda, waxaana hadii uu sida loogu tala galay u hirgalo uu Puntland u horseedi doonaa in ay ka guurto maamulka ku dhisan wax ku qaybsiga hab beeleedka.